साना किसानको खुद नाफा ४९.२९% बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी यस्तो आकर्षक
काठमाडौं : साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १२ करोड २४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । नाफा गत वर्षको भन्दा ४९.२९% ले धेरै हो । गत वर्ष यो लघुवित्तले ८ करोड २० लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा कमाएको थियो ।
साना किसानको खुद ब्याज आम्दानी पनि ३३.५०% ले बढेर २१ करोड ८० लाख ५४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, संस्थाको सञ्चालन नाफा ४९.२९% ले बढेर १९ करोड २४ लाख २७ रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा १२ करोड ८८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
साना किसानले १६ अर्ब ४४ करोड ५८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । चुक्ता पुँजी ६२ करोड ८८ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोषमा १ अर्ब ७१ करोड ५३ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ ।
यस संस्थाले प्रोभिजनमा १ करोड ७४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राखेको छ । खराब कर्जा ०.१०% रहेको साना किसानको कस्ट अफ फन्ड ६.७२% पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ७७ रुपैयाँ ८८ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ ३७२ रुपैयाँ ७८ पैसा छ ।
खल्तीलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गर्न राष्ट्र बैंकले दियो अनुमति, कसरी गर्छ यसले काम ?
पुँजी बजारमा नयाँ माहोल, दिनहुँ सेयर बढ्न थालेपछि लगानीकर्ताको मुहारमा चमक
एक्विजिसनमा जानु अघि पूर्णिमाले यस्तो निकाल्यो वित्तीय विवरण
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १८% बोनस डिम्याट खातामै पठायो, नपाउनेले अब के गर्ने ?
लुम्बिनीमा चमक, खुद नाफा ८६.२६% ले बढाउँदा रिजर्भ र प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
शाइन रेसुंगाले ३१.०७% ले बढायो खुद नाफा, पूर्णिमालाई एक्वायर गर्दै